Ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo Xabsi guri la geliyay | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo Xabsi guri la geliyay
Ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan oo Xabsi guri la geliyay
Muqdisho (Halqaran,com) – Ciidamado ka tirsan Hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa Xabsiga dhigay ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan, kaddib markii hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ay kala baxeen.
Ehelada Xaaji Abuukar Cumar Caddaan ayaa waxay xaqiijiyeen xarigiisa, iyagoo aan garanayn sababta loo xiray.
Wareysi uu Xaaji Abuukar Cumar Caddaan siiyay Radio Kulmiye ee Magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay inuu taageersan yahay mabda’a ay ku taagan yihiin Al-Shabaab, islamarkaana uu doonayo in la laayo diblomaasiyiinta shisheeye ee degan Xarunta Xalane ee Muqdisho.
Waxay aheyd bishii hore ee September markii Magaalada Muqdisho lagu xiray ganacsato uu ka mid ahaa Maxamuud Cumar Caddaan, oo la dhashay Xaaji Abuukar Cumar Caddaan. Tallaabada lagu xiray waxay ka dambeysay, markii lagu eedeeyay inay u garsoor doonteen Maxkamadaha Al-Shabaab.
Warar ayaa sheegaya, in ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan la geeyay guri ay ku ilaalinayaan Ciidamo ka tirsan hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaran ee NISA. wararka ayaa intaasi ku daraya, in loo ogolaaday dadkii u adeegi lahaa.
Laamaha ammaanka iyo Masuuliyiinta Dowladda Federaalka ayaan ka hadlin tallaabada lagu xiray ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan.
Ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Caddaan
Xabsi guri la geliyay